FANAKATONANA NY MAGRO : « Voan’ny fanararaotam-pahefana nataony Ravalomanana »
Miteraka resabe ho an’ny Rodoben’ny mpanohitra ny fanakatonana ny orinasan’ ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc, noho ny tsy fandoavana hetra izay mitentina maherin’ny 70 miliara Ariary. 10 septembre 2020
Manoloana izay dia namoaka ny heviny ny sekretera jeneralin’ny « Cercle de réflexion inter-musulman » Moussa Soilihy.
Voan’ny fanararaotam-pahefana nataony ingahy Ravalomanana Marc fa tsy misy idiran’ny resaka politika, hoy ity farany. « Avadika mantsy ankehitriny ny resaka ka lazaina fa fanenjehana ara-politika no ataon’ny Fitondrana misy ankehitriny. Manaja ny lalàna sy mampihatra izany ny Mpitondra Fanjakana, izay mifanohitra tamin’ny fomba ratsin’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Isan’ny endrika isehoan’ny tsy fanajana lalàna ny tsy fandoavana hetra. Melohin’ny lalàna izany ary fantatry ny tompon’andraikitra ao amin’ny Rodoben’ny mpanohitra tsara izany », hoy hatrany Moussa Soilihy.
« Ravalomanana Marc amin’ny maha Filoham-pirenena azy teo aloha dia tokony ho modely. Tokony hampianatra ny taranaka fara aman-dimby fa adidy amin’ny maha olom-pirenena antsika ny fandoavana hetra. Tsy mifidy loko politika ny fandoavan-ketra ka hoe rehefa Tim ianao na Mapar dia tsy handoa hetra », hoy ny nambaran’ity farany.
« Namiratra tamin’ny fanararaotam-pahefana sy fanapotehana ny orinasa malagasy ingahy Ravalomanana, fony izy teo amin’ny Fitondrana. Nataony ampihimamba avokoa ny orinasa malagasy ankoatra ny harem-pirenena. Nakatony ny orinasa « 3 frères » ary nogadrainy mihitsy ireto farany. Toy izay koa ny Afoma ny « pêcherie » raha tsy hilaza afa-tsy ireo. Eny fa na mpivarotra « yaourt » madinika aza dia tsy navela niasa. Ajanony ny famitahana sy fandrebirebena ny saim-bahoaka », hoy Moussa Soilihy.
Toe-javatra samy hafa tanteraka
Ezahin’ny sasany voizina, hoy hatrany ity farany, fa mitovy tamin’ny toe-javatra tamin’ny taona 2009 ny zava-misy ankehitriny. « Tsia tompoko samihafa mihitsy. Raha nakaton-dRavalomanana ny fahitalavitra sy onjam-peo Viva tamin’ny androny dia noho ity orinasa ity nandefa horonantsary anankiray momba ny Filoha teo aloha Amiraly Ratsiraka. Izany hoe resaka fahalalahana maneho hevitra. Ny toe-javatra misy ankehitriny kosa dia hafa tanteraka ary izay no mahatonga ny olona tsy taitra akory. Te hamerina « sary tamin’ny 2009 » mantsy ingahy Ravalo sy ireo namany ao amin’ny Rodoben’ny mpanohitra. Tsy mahay tantara angamba izy ireo na koa jamban’ny fitiavan-tena sy fitiavan-tseza diso tafahoatra », hoy hatrany i Moussa Soilihy. Hafatra sy vahaolana nomen’ity farany ho an’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc ny hoe : « Aloavy ny hetranao. Tsy ianao ihany ve no nilaza fa ny vola misy fa ny hampiasana azy no tsy misy ? »
Mampitandrina noho ireo salama misy Covid ny talen’ny Fahasalamana FIHENAN’NY MARARY AO MAHAJANGA (1870) 11 mai 2021 ALAKAMISY 6 MAY - ALAROBIA 12 MAY 20121 (738) 10 mai 2021 “Môtô halatra no atakalo rongony mahery vaika” FIDOROHANA TAFAHOATRA (50) 11 mai 2021 Mampisavoritaka ny amboletran’ i Raoul Rabekoto KITRA MALAGASY (47) 11 mai 2021 Tsy ampy 3 000m3 isan’andro ny rano tsinjarain’ny Jirama TANANAN’I MAHAJANGA (37) 11 mai 2021 Tsaboina sy toroana hevitra any an-trano ireo mararin’ny Covid – 19 « COUP DE POING » (36) 11 mai 2021